Microsoft က Band2ဆန်းစစ်ခြင်း: အများစုမှာအစွမ်းထက် - သတင်း Rule
Microsoft က Band2ဆန်းစစ်ခြင်း: အများစုမှာအစွမ်းထက်
အဆိုပါ Microsoft က Band2အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူး, ရရှိနိုင်တဲ့ဈေးအပေါဆုံးသို့မဟုတ်အရှည်ဆုံး-တည်တံ့ကြံ့ခိုင်ရေး tracker. သို့သော်ထိုသို့အာရုံခံကိရိယာများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတူထုပ်ပိုးသည်, နှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးအပြည့်အဝ-featured ကိုခြေရာခံတစျဦးဖွစျသညျ.
sensor များနှင့်အတူထုပ်ပိုး, သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းသို့စိတ်ဝင်စားစရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးစဉ်ချွေးစေးဖြစ်ခြင်းမပါဘဲဝတ်ဆင်ဖို့အဆင်ပြေ, လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Microsoft က Band2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အာဏာအရှိဆုံးနှင့်အသုံးဝင်သောကြံ့ခိုင်ရေးကိုခြေရာခံများထဲမှတစ်ခု” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com သောကြာနေ့ 22 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
တစ်ကြံ့ခိုင်ရေး tracker အောင်မှာ Microsoft ရဲ့ဒုတိယကြိုးပမ်းမှုဟာသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထက်အများကြီးပိုအဆင်ပြေနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်, အာရုံခံကိရိယာတွေနဲ့ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူ.
အဆိုပါ ပထမဦးဆုံး Microsoft က Band တစ်ဦး chunky ခဲ့သည်, ရှုပ်ထွေး device ကို, နှင့်စဉ်, အချို့သောနည်းလမ်းများအတွက်, ကလက်ကောက်ဝတ်မှတင်းကျပ်စွာဝတ်ဆင်ခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းပစ္စည်းတွေထက်ပိုအဆင်ပြေခဲ့, အဲဒါကို ပတ်သက်. ပြစ်မှုဆိုင်ရာခြေကျင်း tracker အနည်းငယ်ကို whiff ထက်ပိုမိုခဲ့.
Fit နှင့် finish ကို
အဆိုပါတီးဝိုင်းတစ်ကွေး display ကိုရှိပါတယ်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရော်ဘာနှစ်ဖက်နဲ့ချိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသောနှင့်အာရုံခံကိရိယာများများအတွက်ဘက်ထရီနှင့်လျှပ်ပါရှိသည်တစ်ခက်စိမ်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Microsoft က Band2မြောင်းကို ပလပ်စတစ်မျက်နှာပြင် တစ်ဦးကို Gorilla Glass display နှင့်သတ္တုကိုယ်ခန္ဓာအဘို့. ဒါဟာကောင်းသောကြည့်, တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တောက်ပတဲ့ AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့်အတူဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူသည်, ထိုသို့အားလုံးအချိန်ကိုသုံးနှစျလအတွက်ရိုက်ချိုးသို့မဟုတ်ကုတ်မထားပါဘူး. တီးဝိုင်း၏ကျန်ပေါ်မှာနှစ်ခုသတ္တုအဆက်အသွယ်တွေနဲ့သတ္တုချိတ်နှင့်တစ်ဦးပလတ်စတစ်အတုံးနှင့်အတူတစ်ခက်ခဲတဲ့ဒါပေမဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အနက်ရောင်ရော်ဘာဖန်ဆင်းထားသည်.
အဆိုပါအတုံးဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်, နှင့်သတ္တုအဆက်အသွယ်အရေပြားအာရုံခံကိရိယာအချို့ကိုအဘို့ဖြစ်ကြ၏. အဆိုပါချိတ်တစ်လျှောဖြစ်ပါတယ်, တွန်းအားပေး-button ကိုလွှတ်ပေးရန်, မြတ်သောသော. သင်တို့အပေါ်မှာနဲ့ off ယူနဲ့ယင်ကောင်အပေါ်အလွယ်တကူပြုလုပ်ချိန်ညှိနိုင် - အလွန်အသုံးဝင်တစ်ပြေးဘို့မယ့်အခါသင်တိုင်းရက်ကြာခြေရာခံနှင့်သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်ပတ်ပတ်လည်ရွေ့လျားကြောင့်တားဆီးဖို့တင်းကျပ်တဲ့မထိုက်မတန်တစ်ဦးနှစျသိမျ့မထိုက်မတန်အကြား switching တဲ့အခါ.
တီးဝိုင်းရဲ့ထိပ်နဲ့အောက်ဆုံးတီးဝိုင်း၏တဘက်တချက်တင်းကျပ်စွာဖြစ်ရန်မလိုဘဲလက်ကောက်ဝတ်ပေါ်ရာဌာန၌ကိုင်, ဒါကြောင့်အများကြီးလျော့နည်းချွေးစေးအချို့ပြိုင်ဘက်ထက်အဓိပ်ပာယျ. တစ်ရှပ်အင်္ကျီ cuff အပေါ်ပွတ်နယ်ကနေဝတ်ဆင်နှစ်လပြီးနောက်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ခဲ့, သို့သော်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဒါဟာရှပ်အင်္ကျီ cuff အောက်မှာကိုက်ညီ, ချွေးစေးမဟုတ်ပါဘူးနှင့်သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တင်းကျပ်စွာခံစားရဖို့ရှိသည်ပါဘူး. ဒါဟာနှင့်အတူပေါ်ရိုက်ထည့်ဖို့လည်းလွယ်ကူပါတယ်, သင့်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်၏ဘေးထွက်ပတ်လည်တီးဝိုင်းပါးလွှာသည်အဖြစ်, ဒါပေမယ့်ရော်ဘာအပေါ် finish ကိုလသာစုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက် wear ၏သိသာနိမိတ်လက္ခဏာများပြသထားတယ်.
အဆိုပါတီးဝိုင်း2ရေစိုခံမဖြစ်, ဒါပေမယ့်ချွေး-အထောက်အထားဖြစ်ပါသည်. ကနှင့်အတူရေချိုးခန်းအပေါ်ဘယ်သူမျှမက, သို့မဟုတ်ရေကူး, ဒါပေမယ့်ပြဿနာမပါဘဲလေ့ကျင့်ခန်းရှင်သန်လိမ့်မည်.
ပြသ: 12.8မီလီမီတာ x ကို 32mm AMOLED (320×128 pixels ကို)
connectivity ကို: ဘလူးတုသ် 4.0
လိုက်ဖက်တဲ့: Android မှာ 4.3+, iPhone 4S ကိုသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း, က Windows Phone 8.1 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း
sensors: optical နှလုံးခုန်နှုန်း, 3-ဝင်ရိုး accelerometer, gyrometer, ဂျီပီအက်စ်, ပတ်ဝန်းကျင်အလင်း, ခရမ်းလွန်, အရေပြားအပူချိန်, capacitive အာရုံခံကိရိယာ, သွပ်ရည်စိမ်အရေပြားတုန့်ပြန်, ဘာရိုမီတာ
အာရုံခံကိရိယာပြသမှုအောက်မှာလက်ကောက်ဝတ်ပေါ်မှာထိုင်အဆိုပါ optical နှလုံးခုန်နှုန်း, အ wearer ရဲ့အသားအရေနှင့်အတူအစိုင်အခဲအဆက်အသွယ်အောင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါတီးဝိုင်း2အတူရရှိနိုင်ဆုံးနည်းပညာအဆင့်မြင့်ကြံ့ခိုင်ရေးကိုခြေရာခံတစျဦးဖွစျသညျ 10 ကွဲပြားခြားနားသော sensor များနှင့်တစ်ဦးမိုက်ကရိုဖုန်း. ထိုအာရုံခံကိရိယာတချို့ကတိုက်ရိုက်ဖတ်-တနေရာပေး, ထိုကဲ့သို့သောစဉ်ဆက်မပြတ် optical နှလုံး-rate ကိုအာရုံခံကိရိယာအဖြစ် (ငါစမျးသပျဖူးတဲ့အရှိဆုံးတိကျမှုတစျခုသောဖြစ်ပါသည်), ထိုခရမ်းလွန် sensor နဲ့ GPS စနစ်. အခြားသူများကခြေလှမ်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှု detect လုပ်ဖို့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြသည်, လမ်းကြောင်းလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အခြားအမှုအရာ.
ထိုကဲ့သို့ပင် မူရင်း Microsoft က Band, ထိုအာရုံခံကိရိယာအချို့ကိုအသုံးပြုစေပေါ်လာပါဘူး, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး data ကိုသေးအသုံးပြုသူလက်လှမ်းမဖြစ်.
သတင်းအချက်အလက်အများစုမှာတီးဝိုင်းကိုယ်တိုင်ကအပေါ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ် app ကိုနဲ့ web app ကိုမှတဆင့်, ငါဆိုကြံ့ခိုင်ရေး tracker နှင့်အတူအသုံးပြုထားသောအကောင်းဆုံးများထဲမှသောဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါတီးဝိုင်း2လည်းအိပ်ခြေရာခံများနှင့်အကောင်းဆုံးအခိုက်မှာသင်နိုးထဖို့တုန်ခါနှိုးဆော်သံရှိပါတယ်. အဆိုပါမှတျတမျးတငျထားဒေတာငါစုံစမ်းပြီဆိုအိပ် tracker ၏ဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာအချို့ကိုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစစံအလင်းကိုပြသ, ညဉ့်ကိုတဆင့်နက်နဲမှေးကွိုအိပ်အမှတ်အသားများ. သို့သော်လည်းငါသည်လည်းငါအိပ်ရာမဝင်မီစပျစ်ရည်ကိုတစ်ဦးဘီယာသို့မဟုတ်ဖန်သောက်ရသောအခါအကြှနျုပျစိတျနှလုံးက၎င်း၏ကျိန်းဝပ်ရောက်ရှိပါဘူးသိမြင်နိုင်ပါတယ် 49 ထိုအရက်ညဉ့်သန်းခေါင်ယံ၌ငါ့ system ထဲကနေရှင်းလင်းခဲ့ပြီးနောက်သည်အထိတစ်မိနစ်လျှင်စည်းချက်.
အိပ်စက်ခြင်းခြေရာခံနိုင်တဲ့အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်, ရိုးရှင်းစွာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသို့မဟုတ်ဘယ်လောက်နက်ရှိုင်းစွာသင်အိပ်ပျော်ကျော်လွန်ပေးအသိအမြင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ငါအိပ်ပျော်တယ်, ဒါပေမယ့်အရက်ငါ၏ချမ်းသာနှောင့်နှေးခဲ့သည်, သောအရက်၏ပင်သေးငယ်တဲ့ပမာဏသာနံနကျအခြိနျ၌အကြှနျုပျကိုပိုပြီးပင်ပန်းစေပါအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ရှင်းပြသည်.
Microsoft ကကနျြးမာရေးကိုဒေတာငါ့ဥာဏ်ကွာခြားချက်၏လောကဓာတ်စေအချက်အလက်များ၏ဤသူငအပိုင်းပိုင်းနှင့်ပြည့်ဝ၏, ထိုသို့အသီးအသီး update ကိုနှင့်အတူတိုးတက်လာနေသည်. အခြားပလက်ဖောင်းတစ်ဦးကိုလစဉ်ကြေးပေးဆောင်စရာမလိုဘဲအတော်လေးတူညီယူဆချက်များသို့မဟုတ်အသေးစိတ်မပူဇော်ဘူး.
အကောင်းဆုံးကို features အသစ်တစ်ခုမှာထုံးစံလေ့ကျင့်ခန်းတည်ဆောက်နှင့် Band မှသူတို့ကို upload လုပ်နိုင်စွမ်းသည်, ထို့နောက်သင့်တိုးတက်မှုကိုကိုခြေရာခံနိုင်သည့်, တစ်ခုခုကိုပြီးစီးခဲ့ကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်အချိန်အားဖြင့်.
စိတ်တိုင်းကျလေ့ကျင့်ခန်းကို Band ရဲ့အားကြီးသောအချက်များ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏, အားဖြင့်သင်တို့လမ်းညွှန်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်အချိန်ကိုတိုင်းတာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
လုပ်ဖို့မြန်ဆန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်. ငါငါးမိနစ်အတွင်းတစ်ဦး 10-ခြေလှမ်း circuit ကို-သင်တန်း built, ငါ၏အ Band မှတင်နှင့်ကွာငါသွားကြ၏. သင်လုပ်နေလုပ်နေအဘယျအသေချာမဆိုရင်အများအပြား Pre-programs လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိပါတယ်, အလွန်ကောင်းသောရှင်းလင်းဗီဒီယိုများနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံ, ကနေရှေးခယျြဖို့.
ခြေရာခံခြင်း Running လည်းမြတ်သောဖြစ်ပါသည်, အ GPS စနစ်နှင့်အတူတည်နေရာတစ်ခုပြင်ဆင်ချက်ရတဲ့နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း, ဒါကြောင့်နှလုံး-rate ကိုတီးဝိုင်းလေ့ကျင့်ရေးများအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံပြေးလက်ပတ်နာရီအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်ထိရောက်သောမဟုတ်ပါဘူးပေမယ့်.
စမတ်နာရီ features တွေ
Microsoft ရဲ့ '' ကွက်များ 'ဆိုတဲ့တီးဝိုင်းအပေါ်အမှုတို့ကိုပြုကြောင်းသေးငယ်တဲ့ apps များဖြစ်ကြသည်, ခြေရာခံအိပ်ပျော်ခြင်းမှစမတ်ဖုန်းအသိပေးချက်များကိုပေးရန်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အစိုင်အခဲကြံ့ခိုင်ရေး-tracking feature ကို set ကို ကျော်လွန်., အ Band2တစ်ဦး Pseudo-စမတ်နာရီများကဲ့သို့ပြုမူနေ. ဒါဟာစမတ်ဖုန်းမှသတိပေးချက်များဖျောပွနိုငျ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပါအဝင်, ခလုတ်တစ်ခု၏နှစ်ဆကိုထိပုတ်ပါမှာဂီတထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်, နှင့် Twitter အဘို့အကြွပ်ရှိပါတယ်, Facebook က, messenger ကို, စတော့ရှယ်ယာများ, မိုးလေဝသနှင့် Starbucks က, သောသင်တစ်ဦးဘားကုဒ်ကိုနှင့်အတူကော်ဖီများအတွက်ပေးဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်.
က Windows Phone အသုံးပြုသူများအတွက်ချိတ်ဆက်သတင်းအချက်အလက်ကိုတက်ဆွဲနဲ့အသံထိန်းချုပ်မှုဖျော်ဖြေဖို့မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ကို virtual လက်ထောက် Cortana access လုပ်နိုင်. သည်အခြား features တွေအများစုဟာ, Android နဲ့ iOS ကိုလွန်းတွင်တေးဂီတပြန်ဖွင်ထိန်းချုပ်မှုအလုပ်အပါအဝင်.
အဆိုပါအားသွင်းသံလိုက်ကို USB ပါဝါအဒက်ထဲသို့သိုင်းကြိုးနဲ့ပလပ်ရဲ့အဆုံးမှအလေးထား. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Microsoft က Band2ငါ၏အစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်စွဲချက်အကြားရုံကျော်နှစ်ရက်ကြာ. ဘက်ထရီအသက်တာကိုလျှော့ချတစ်ပြေးများအတွက် GPS စနစ်အသုံးပြုခြင်း, လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပေါ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူတစ်လက်ပတ်နာရီအဖြစ်အသုံးပြုဒါမှမဟုတ်တီးဝိုင်းကိုစလှေတျအကြောင်းကြားစာများရှိခြင်းပါဘူးအဖြစ်. ငါအကြောင်းကြောင့် charging ကိုတွေ့ 20 မိနစ်တစ်နေ့ကို - 10 ကြင်နာမှုနှင့်စဉ်မိနစ် 10 အိပ်ရာမဝင်မီငါ့သှားနိန်စဉ်မိနစ် - အကြားစောင့်ရှောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခဲ့သည် 50 နှင့် 80% စွဲချက်တင်.
ဒါဟာကို USB နှင့်အတူဖွင့်ကျော်တစ်နာရီအတွက်အပြည့်အဝစွဲချက်, အခိုငျအမာဆုပ်ကိုင်နှင့်အတူသံလိုက်အားသွင်းကြောင်းကလစ်များအသိုင်းကြိုးရဲ့အဆုံးပေါ်သို့.
အဆိုပါ Microsoft က Band2သုံးအရွယ်အစားအတွက်£ 200 ကုန်ကျ, သေးငယ်သော, အလတ်စားနှင့်အကြီးစား, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးတည်းသာအရောင်. နှိုင်းယှဉ်, အ Fitbit ဒီရေအလားတူအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူ£ 200 ကုန်ကျ.
အဆိုပါတီးဝိုင်း2အတွင်းအပြင်ဒါမှမဟုတ်လက်ကောက်ဝတ်ပြင်ပဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်, ဤနေရာတွင်နှလုံးခုန်နှုန်းခြင်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Microsoft က Band2အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူး, ရရှိနိုင်တဲ့ဈေးအပေါဆုံးသို့မဟုတ်အရှည်ဆုံး-တည်တံ့ကြံ့ခိုင်ရေး tracker. သို့သော်ထိုသို့အာရုံခံကိရိယာများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတူထုပ်ပိုးသည်, နှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးအပြည့်အဝ-featured ကိုခြေရာခံတစျဦးဖွစျသညျ. ဒါဟာအန်းဒရွိုက်နှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်-လိုက်ဖက်တဲ့င်, iOS နဲ့ Windows ကိုချီးမွမ်းခြင်းသည်, Microsoft ရဲ့ကနျြးမာရေး app ရဲ့ app များနှင့်အချက်အလက် visualization ဖြစ်သကဲ့သို့.
ဒါဟာကောင်းသောစေသည်, ဟောင်းနွမ်းခံရဖို့ခေတ်မီတီးဝိုင်းအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စကားမပြောနိုင်သောလက်ပတ်နာရီ, တစ်ရှပ်အင်္ကျီ cuff အောက်မှာကိုက်ညီ, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးမှထွက်ထွက်-and စမတ်နာရီအဖြစ်လျော့နည်းအသုံးဝင်သည်. ဒါကြောင့်ကြာရှည်လိမ့်မယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးပတ်ပတ်လည်အမှတ်အသားများမေးခွန်းထုတ်လည်းရှိပါတယ်, သိသိသာသာကိုပထမဦးဆုံးနှစ်လအတွက် wear လက္ခဏာပြသပြီးမှ.
အကောင်းအဆိုး: အာရုံခံကိရိယာ-လူမှုအဖွဲ့, စဉ်ဆက်မပြတ်နှလုံးခုန်နှုန်း, ဂျီပီအက်စ်, ချွေးစေးမ, ဆံပင်အထဲကဆွဲထုတ်မပါဘူး, ကောင်းသောဒေတာ visualization, Cross-platform, အဘယ်သူမျှမကိုလစဉ်ကြေး, အလွန်ကြီးစွာသောအိပ်ခြေရာခံခြင်း, ထုံးစံလေ့ကျင့်ခန်းအစိုးရများ / ခြေရာခံခြင်း, အသိပေးချက်များ
Cons: ရေစိုခံမ, အတော်လေး chunky, ရော်ဘာ wear လက္ခဏာကိုပြသ, ဘက်ထရီသက်တမ်းပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
တကယ်ကောင်းစွာရိုးရိုးကဒ်အထိုင်တလျှောက်ကလျှောသဖြင့်လွယ်ကူသောကို on-the-fly ညှိနှိုင်းမှုကိုခွင့်ပြုအချိတ်အကျင့်ကိုကျင့်. အဆိုပါချိတ်ကိုလည်းအပေါ်တစ်ဦးခရမ်းလွန်အာရုံခံကိရိယာရှိပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Microsoft က Band ပြန်လည်သုံးသပ်: အာရုံခံကိရိယာ-ထုပ်ပိုး - သင်တစ်ဦးပြစ်မှုကျူးလွန်သူတူရှာဖွေနေစိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်
Fitbit ဒီရေပြန်လည်သုံးသပ်: အတော်လေးစူပါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးခြေရာခံခြင်းလက်ပတ်နာရီ
Android မှာ, အပိုဒ်, အသုံးပြုနိုင်မှု, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, IOS ကို, အသက်နှင့်စတိုင်, Microsoft က, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ, ဝတ်ဆင်ကနည်းပညာ, က Windows Phone
← 15 သင်က Google ကိုထဲသို့ရိုက်ထည့်ပါနိုင်သလားဒါကရယ်စရာအရာ ဟွာဝေး Mate 8 ဆန်းစစ်ခြင်း →